Ming-Chi Kuo 31,6-inch Monitor uye 16-inch MacBook Pro | Ndinobva mac
Ming-Chi Kuo inotaura nezve 31,6-inch iMac (monitor) uye 16-inch MacBook Pro
Muongorori ane mukurumbira ane hunyanzvi muApple Ming-Chi Kuo anoonekwa zvekare mune vezvenhau neimwe yeifungidziro idzo dzinodiwa nevadi veMac uye ndiko kuti maererano neshumo yake Apple ingadai iri kugadzirira 31,6-inch Monitor kana iMac pakupera kwegore rino, itsva MacBook Pro modhi kana maviri emakore akati wandei uye nyowani iPads ye2020. Zviripachena kuti vakomana vemuCupertino vanga vachinge vachigadzirira yakakura iMac yekutarisa kana skrini, kunyanya pane kutaurwa kweiyi saizi inopfuura makumi matatu nemasendimita asi izvi zvese runyerekupe uye tinofanirwa kuona mafambiro anoita nyaya.
Kuo, haasi mumwe wevanoongorora vanowanzokundikana mune zvaakafungidzira kunyangwe tichifanira kufunga kuti anoburitsa akawanda gore rese. Chero zvazvingaitika nhau / runyerekupe nezve mukana wekuve nyowani MacBooK Pro nehukuru hwescreen saizi (kwete kubva kuchikwata chizere) isu tinofunga zvakanaka uye chimwe chinhu chiri pachena tichiona shanduko mu iPhone ne iPad. Kana iwe ukawedzera ichi chihombe skrini muMac, saizi yazvino modhi yemakumi maviri neshanu inogona zvakare kugara yakafanana asi ichikura pachiratidziri, tichaona.
IPad inowanikwawo mune fungidziro
Uye ndeyekuti runyerekupe urwu harugare muzvinhu zviviri. Zvakare mukana wekuona iyo nyowani iPad inoonekwa munhau dzakaburitswa nemuongorori kunyangwe chiri chokwadi kuti ino ndeyakareba kubvira inotaura nezve itsva iPad modhi ye2020.
Pane inogoneka kana kuti inokwanisika nyowani MacBook Pro, shanduko mukugadzirwa kwechiratifomu ine mafirita matete uye pamwe yakabatanidzwa Face ID inogona kutarisirwa, ichi chingave chiitiko chakanaka kunze kwekuvandudza mapurosesa uye zvimwe zvemukati zvemidziyo. Zvine musoro, saizi hombe yescreen haireve hukuru hukuru hwemidziyo, saka tinotarisira kuti yazvino 15 ″ modhi haina kukura mumatanho uye inokura pachiratidziri. Tichaona kana iri yekupedzisira mamodheru kana imwe nekuti mutsauko we 0,5 inches hauratidzike kunge wakakosha kuvhura maviri mamodheru, ingangoita gumi nematanhatu kana chero zvodii 16 inches. Tichaona zvinoitika pakupera kwegore neiyi inofungidzirwa iMac kana hombe yekutarisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » MacBook Pro » Ming-Chi Kuo inotaura nezve 31,6-inch iMac (monitor) uye 16-inch MacBook Pro
IKEA uye Sonos AirPlay 2 vatauri vava pamutemo
Adobe vhidhiyo kunyorera inotora mukana weakabatana eGPUs kuwedzera mashandiro